Sida loogu daro xarfo dheeri ah Word | Madasha Mobile -ka
Cristian Garcia | 03/10/2021 09:06 | Microsoft Word, Qalabka otomaatiga
Ma yihiin xuruufta caadiga ah ee ku jirta Microsoft Word caajis iyo soo noqnoqosho? markaad dhameyso akhrinta maqaalkan oo dhamaan doona. Nidaamkayaga hawlgalka ee Windows wuxuu la yimaadaa xarfo badan oo aan caadi ahayn oo loogu talagalay processor -ka eraygaaga, Ereyga caanka ah. Laakiin qaar badan oo iyaga ka mid ah ayaa laga yaabaa inay aad u daran yihiin ama aad mar horeba isticmaashay. Ama inaad rabto inaad ku tijaabiso waxyaabo kale qoraalladaada. Markaa markaa waxaad u baahan tahay inaad ogaato sida loogu daro xarfaha ereyga taasina waa waxa aad baran doonto haddii aad maqaalkan akhrido ilaa dhammaadka.
Sida loogu biiriyo laba miis oo ku jira Word hab fudud
Dhammaan xuruuftahan ama xuruufta kala duwan, u yeer X, waxay kuu oggolaan doonaan inaad ku habbeysid dhammaan barnaamijyadaada ama qoraalladaada sidaasna aad ku habayn karto wax kasta oo aad rabto ugu badnaan. Internetka waxaa jira kumanaan xaraf oo aad soo dejisan karto ka dibna aad ku adeegsan karto kombuyuutarkaaga adoo ku rakibaya ka dibna taasi waa waxa aan ku bari doonno. Si kastaba ha noqotee, ha ku khaldin ereyga ama muujinta ku -rakibidda xarfaha ereyga maxaa yeelay dhab ahaantii waxa aan sameyneyno ayaa ku rakibaya nidaamkayaga hawlgalka Windows 10. Waa isaga kan wax barta oo ku dara barnaamij kasta iyo barnaamij kasta oo aad adigu ku rakibtay PC -gaaga .. Taasi waa sababta aan kuu sheegayno inaadan u malayn inay tahay rakibida Ereyga, ee waa soo dejinta guud ee nidaamka ku fidsan dhammaan barnaamijyada rakiban, oo ay ku jiraan Microsoft Word.
1 Halkee laga helaa iyo sida loogu daro xarfaha ereyga?
1.2 Google Faraha
1.4 La wadaag dukumiintiyada ereyga adigoon lumin fonts
Halkee laga helaa iyo sida loogu daro xarfaha ereyga?
Waxa ugu horreeya ee ay tahay in la caddeeyo ayaa ah in si loogu rakibo xuruufta nidaamkayaga hawlgalka, waa inaad ka soo dejisaa internetka. PSi aad awood ugu yeelatid soo dejintooda, waxaa jira bogag badan oo shabakad ah oo lacag la'aan kugu siin doona. Iyaga dhexdooda waxaad ka heli doontaa dhammaan noocyada font -ka bilaashka ah ee aad isticmaali karto. Dhammaantood waxaad sidoo kale awoodi doontaa inaad tijaabiso xuruufta ka hor intaadan soo dejin, waxay haystaan ​​sanduuq ay wax ku qoraan halkaasna waxaad ku arki doontaa sida farta qoristu tahay. Taasi waa sababta aan u dooneyno inaan halkaan ka bilowno si aad ugu caddaato meesha aad aadeyso marka aad rabto inaad ku rakibto xarfo badan nidaamkaaga hawlgalka. Aan raacno bogagga shabakaddaas:
Dukaanka Microsoft ama sidoo kale la yaqaan iyada oo loo marayo Dukaanka Windows waxaad awoodi doontaa inaad gasho si aad u soo dejiso dad badan Xarfaha cusub iyo awood u lahaanshaha inaad ugu adeegsato qoraalkaaga Microsoft Word haddii aad tahay isticmaale Windows ah, dabcan. Dhammaan xuruuftahan aad ka rakibtay dukaanka Windows waxay ku sii xirnaan doonaan kombuyuutarkaaga waxaadna awood u yeelan doontaa inaad ku adeegsato dhammaan barnaamijyada kuu oggolaanaya inaad qorto qoris si aad u beddesho qaabka qoraalka.
Si aad ugu darto xarafyada dukaanka rasmiga ah ee Windows waa inaad raacdaa talaabooyinkan:
Sii wad si aad u furto goobaha kombiyuutarkaaga haddii aad haysato Windows 10
Hadda tag qaybta Shakhsiyeynta
Hagaajinta waa inaad raadisaa qaybta Fonts -ka
Markaad hesho waa inaad gujisaa ikhtiyaarka Ka hel xarfo badan Dukaanka Microsoft.
Hadda daaqad ayaa furi doonta taas oo aad ku arki karto tiro badan oo xarfo ah oo laga heli karo dukaanka Microsoft Windows. Hadda waxaad ku jirtaa tallaabadii u dambaysay sida yaa leh. Kaliya waa inaad doorataa midka aad jeceshahay oo guji iyaga ka dibna badhanka helitaanka ayaa soo muuqan doona. Sidan oo kale, soo dejintu waxay ka bilaabmi doontaa dukaanka Windows -ka oo marka la dhammeeyo waxaad yeelan doontaa font -ka cusub ee la heli karo si aad ugu adeegsan karto Windows 10 iyo gaar ahaan Ereyga. Sidaa darteed waxaad hore u taqaanay sida loogu daro xarfaha Word -ka Dukaanka Windows ama Dukaanka Microsoft.
Kani wuxuu noqon karaa mid ka mid ah bogagga shabakadda ee ugu caansan si loo soo dejiyo xarfaha naqshadeynta garaafka ama si fudud loogu qoro Ereyga. Google lagama tegi doono sidoo kale sida Microsoft Windows waxay bixisaa xarfo badan bilaash ah oo aad ka soo dejisan karto kuna rakibi karto kombuyuutarkaaga iyo in aad markaa ku dari karto barnaamij kasta sida hawlwadeennada erayga, Word.
Gudaha Fonts -ka Google waxaad ku raadin kartaa magac ahaan, sidoo kale luqad iyo nooc ama xitaa astaamo isku qaab ah si aad u hesho dhammaan ilahaas aad jeceshahay. Intaas ka dib waa inaad soo dejisaa oo ku rakibtaa kombuyuutarkaaga adigoon wax dhib badan lahayn.
Haddii aad tahay naqshadeeye ama naqshadeeye garaaf waxaad hore u ogaan doontaa iyada maxaa yeelay sidoo kale waa degel aad loogu jecel yahay soo dejinta noocyada. Dafont waa mid ka mid ah bogagga loogu booqashada badan yahay xitaa ku darista xarfaha ereyga. Waxay ballanqaadaysaa waxay siiso. Waa degel leh boqolaal iyo boqolaal xaraf oo loo heli karo nidaamyada hawlgalka ee kala duwan sida Windows 10, Windows 8, Windows 7 oo xitaa waxaad ka heli doontaa xarfo u ah awoowayaashii hore ee Windows Vista iyo kuwo kale. Waxaad sidoo kale ka heli doontaa xarfo macOS iyo nidaamyada kale ee hawlgalka sida Linux.
Markaad gasho Dafont waxaad ka heli doontaa liis ay ku jiraan dhammaan xarafyadii ugu dambeeyay oo lagu daray halka waxaad ku arki doontid dusha waa liiska qaybaha oo dhammaan ilaha la abaabulay markaa waxaad heli kartaa qaabka font -ka aad rabto inaad si dhakhso leh u soo dejiso. Kaliya waa inaad raadisaa font -ka aad xiiseyneyso ka dibna ku dar Ereyga oo soo dejiso. Sida ku dhacday Google Fonts, waxay noqon doontaa oo kaliya raadinta oo bilaabi doontaa soo dejinta iyo ka hor Waxaad ku qori kartaa dhowr eray sanduuq si aad u aragto sida fartaasi u egtahay. Dhammaan xuruuftahan aad soo dejisanayso waxay si toos ah ugu tegi doonaan faylka soo dejinta ee kombiyuutarkaaga.
La wadaag dukumiintiyada ereyga adigoon lumin fonts
Mid ka mid ah waxyaabaha ugu waaweyn ee ay tahay inaad ogaato waa haddii aad maskaxda ku hayso inaad u dirto dukumintiga Word qof kale, waad awoodaa in tani aysan lahayn xarfaha la rakibay oo ay lumiso wax walba. Haddii taasi dhacdo, dokumentigu wuu jabi karaa ama xitaa wuu gelin karaa xarfo kala duwan oo uu qofkaasi rakibay. Si looga fogaado dhibaatadan waa inaad raacdaa talaabooyinkan:
Si aad u bilowdo waa inaad ku furtaa Microsoft Word kombuyuutarkaaga. Hadda ku fur faylka su'aasha leh farta la soo degsaday. Tag faylka geeska bidix ee kore oo fur menu kaydinta. Hadda waa inaad tagtaa xulashooyinka Ereyga. Xulashooyinkaan ka raadi qaybta keydinta halkaasna waxaad ku arki doontaa sanduuq oranaya "Ilaali daacadnimada adigoo la wadaagaya dukumentigan." Hadda waxaad sidoo kale gujin kartaa ku dar xarfaha faylka. Habkan wax dhib ah ma jiri doono marka la wadaagayo faylka Ereyga.
Waxaan rajeyneynaa inaad hore u taqaan sida loogu daro xarfaha ereyga. Sababtoo ah waa raadinta, soo dejinta iyo rakibidda PC -gaaga. Ma jirin dabin ama kartoon. Waxaan kugu arki doonaa maqaalka Madasha Mobile -ka soo socda.
Wadada buuxda ee maqaalka: Golaha Moobaylka » Qalabka otomaatiga » Sida loogu daro xarfo dheeri ah Word